Etu esi apụ Email Marketing Nwere Ike Supportkwado Mgbalị Mgbasa Ozi Gị | Martech Zone
Etu esi aga ahia ịre ahịa na email nwere ike ịkwado ebumnuche gị
Tuzdee, Machị 13, 2018 Ian Cleary kwuru
Nbanye ahịa di uku.
Create mepụtara ọdịnaya.
Drive na-ebugharị okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Na-agbanwe ụfọdụ okporo ụzọ ahụ ma ree ngwaahịa na ọrụ gị.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-esiri ike karịa ka ị nweta nsonaazụ peeji mbụ nke Google yana chụpụ ahịa okporo ụzọ.
content marketing na-aghọ asọmpi ferociously.
Organic ruru na mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ihu ịjụ.
Y’oburu na gi onwe gi achoputaghi na ahia inbound ezughi ezu ozo, ikwesiri inye ya ntinye ozo iji nweta ihe i mechara.
Ma nke ahụ bụ ebe ọpụpụ ozi ịntanetị na-abata.
Ọpụpụ Email Marketing
Ọpụpụ ozi ịre ahịa email bụ maka ịbịaru na ndepụta ndị ezubere iche maka ndị nwere ike inyere aka na azụmaahịa gị.
Ọ bụghị ụdị ozi ịntanetị ị na-atụkarị ebe ị gbawara otu ozi ahụ nye ọtụtụ puku mmadụ. Ọ bụ ihe ọkaibe na stratejik karịa na.
Iji usoro ziri ezi na ngwaọrụ, ọpụpụ email ahịa nwere ike ịdị oke irè na ịbawanye ọhụụ nke akara gị ma na-eweta ndu maka azụmaahịa gị.
Iji ngwa ọrụ, dịka Mgbasa Ozi, nke ahaziri iche maka izipu ozi email ga-enye gị ohere izipu ozi ịntanetị nkeonwe na obere ndị na-ege ntị, melite usoro ntinye, soro nkwukọrịta niile na atụmanya gị, tụọ nsonaazụ nke mkpọsa gị, na ndị ọzọ.
The dashboard na-enye gị ọkwa dị elu nke arụmọrụ
Debanye aha maka nnwale ọnwụnwa 14 ụbọchị
Ugbu a, ka anyị lelee ụfọdụ ụzọ dị irè ị nwere ike iji zụọ ahịa azụmaahịa gị site na iji ngwa izipu ozi email.
Mee njikọ iji mụbaa okporo ụzọ.
Njikọ ụlọ mkpọsa ụlọ na-arụ ọrụ na ihu abụọ - ha na - enyere gị aka ịmepụta profaịlụ njikọ dịgasị iche nke dị oke mkpa maka SEO, ma ha na - eweta okporo ụzọ dị elu na weebụsaịtị gị.
Mana, iji nweta uru ndị a ịkwesịrị ịchọta ohere ụlọ njikọ dị mkpa dịka ikike, saịtị profaịlụ dị elu nwere njikọ chiri anya na isiokwu gị wee rute ha.
Enwere ọtụtụ usoro njikọ njikọ, mana ndị a bụ ole na ole na-arụ ọrụ nke ọma:
Ekele njikọ - Chọta ekele ederede na saịtị metụtara ya na njikọ njikọta.
Broken njikọ - Chọta njikọ ndị agbajiri na saịtị ikike dị elu site na iji ngwa ọrụ dịka Ahrefs ma kpọtụrụ ha iji nye njikọ njikọ.
Njikọ peeji nke njikọ - Chọta ihu akụ dị mkpa ma gbasaa iji nye akụ dị mma nke ga-agbakwunye uru ma dabara n'ụzọ zuru oke na akụ ndị ọzọ dị na ibe ahụ.
Njikọ ụlọ nwere ike iwe oge, mana ọ bara ezigbo uru, yabụ ịkwesịrị ịhazi ijikwa ọrụ gị.
Mee ka iru ọdịnaya gị dịkwuo elu.
Email ịbịaru ozi bụ ụzọ pụtara, nke kachasị dị irè iji chụpụ okporo ụzọ na njikọ aka maka ọdịnaya gị.
You nwere ike ịgakwuru ndị na-eme ihe ike na ụlọ ọrụ gị, blọọgụ metụtara, ma ọ bụ ọbụlagodi ndị mmekọ azụmahịa nke ndị na-ege ha ntị nwere ike inwe mmasị na isiokwu gị. Ọ bụrụhaala na ọdịnaya gị bara uru nke ukwuu, ịkwalite ya site na mgbasa ozi ga-agbasawanye iru ya ma nwee ike ibute ụzọ ọhụụ maka azụmaahịa gị.
Kedu ụzọ ọ bụla, ịkwesịrị inwe a ezigbo usoro nkwalite maka ọdịnaya gị.
Ndị na-eme ihe nkiri iji wuo akara gị.
Zụ ahịa ndị ahịa nwere ike ịba uru dị egwu. N'ezie, otu akụkọ chọpụtara na maka $ 1 ọ bụla ị na-emefu na ahịa influencer ị ga-enweta $ 6.50 azụ.
Nke mbu, ikwesiri idetu ihe edetu nke di nkpa banyere niche gi na mgbasa ozi ị na agba, nwee ikike ime ka ndi na ege ha ihe megharia, ha di nma maka akara gi. Can nwere ike mfe chọta ndị na-eme ihe ziri ezi na GroupHigh.
Inwere ike bulite listi gi na ngwa ngwa ma bido ikwalite mkpọsa gị. Naanị jide n'aka na ị hazie ozi ịntanetị gị maka onye ọ bụla nwere ike ịme ka ị nwekwuo ohere ịnweta nzaghachi.
Ọpụpụ ozi ịre ahịa email dị oke mma maka ijikwa usoro mgbasa ozi, mana ha bara oke uru maka ịdebe mkpịsị aka gị na mmekọrịta gị na ndị na-eme ihe ike ka ha na-etolite.
Mee ka mgbasawanye dịkwuo elu site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ụzọ dị oke ọnụ iji nweta ikpughe na nzipụta ika gị kwesịrị ito. Ikwu okwu na saịtị mgbasa ozi ikike na-enye gị nkwenye nke ndị ọzọ ma na-ebugharị okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị gị.
Mana… Ikwesiri ileba anya ndị editọ ziri ezi, odeakụkọ, na ndị na-ede blọgụ, ndị ga-enwe mmasị na akụkọ ị na-agbanye. Na nke a na-ewetara anyị azụ mkpa ọ dị inwe ndepụta akpọtụrụ akpọrọ.
Chọọ maka ndị kpuchiela ụdị akụkọ ahụ mana gbaa mbọ hụ na ihe ị na-akụ nwere akụkụ na-atọ ụtọ ma dịkwa iche.
Nwere ike ịmepụta mkpọsa PR iji:
Na-akwalite ngwaahịa / njirimara / ọrụ ọhụụ gị
Mee echiche maka akụkọ
Nye onyinye iji kọwaa ihe ọmụma maka isiokwu ndị ga-abịa n’ọdịnihu
Ebe ọ bụ na ndị nta akụkọ na ndị editọ na-arụsi ọrụ ike, ị ga-enwerịrị ndidi ma zipụ ozi ịntanetị ndị na-esochi.
Inwe ngwa nwere ike imezi usoro ntinye ma kpalite ozi ịntanetị ahaziri iche dabere na omume ndị nnata ga-abụ nnukwu nchekwa oge. Na mgbakwunye, ị gaghị echefu ozi ịntanetị ma ọ bụ kọntaktị mgbasa ozi dị mkpa.
Emailzụ ahịa email ọpụpụ (ntụgharị mgbasa ozi email) nwere ike ịkwado atụmatụ inbound gị ma nyere aka na ebumnuche ahịa gị niile.
Ọ bụrụ na inwetabeghị, ụzọ 4 anyị kwuru maka ya n'isiokwu a bụ ebe zuru oke ịmalite site na mmemme mmemme gị. Naanị jiri ngwá ọrụ ịbịanye aka rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ, mee ka ọ dị mfe, ma mee ka usoro a dị ngwa ma ị ga-abụ ihe edozi!
Tags: nzisa ozi emailotuahịa ahịaozi ịpụ apụọpụpụusoro nkwalite